हात धुँदा संक्रमणबाट मुक्ति, नधुँदा के के रोग लाग्छ ?- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १०, २०७६ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — नियमित रूपमा प्रक्रिया पुर्‍याएर साबुनपानीले राम्ररी हात धुँदा कोरोना, मौसमी रुघाखोकी, श्वासप्रश्वासबाट हुने संक्रमण, टाइफाइड, झाडापखालालगायतका थुप्रै संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
विशेषज्ञका अनुसार संक्रमण फैलन नदिने हो भने हात धुनु सबैभन्दा बढी प्रभावकारी तरिका हो । अन्य व्यक्तिलाई छुँदा केही खास रोग फैलन सक्ने भएकाले हात धुनु अत्यावश्यक मानिन्छ ।
अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) का अनुसार मानिसले छोएको ठाउँमा दुई घण्टाभन्दा बढी समयसम्म कीटाणु जीवित रहन सक्छ । यति मात्र हैन, जतिबेला मानिसले दूषित वस्तु वा सतहलाई छुन्छ, उसको हातमा फोहोरमा रहेका कीटाणु टाँसिन्छ । त्यही हात उसले अनुहार, आँखा, मुखमा लाँदा र नाक आदि कोट्याउँदा र छुँदा संक्रमणको मारमा पर्छ ।
‘नियमित रूपमा साबुनपानीले हात धुँदा मौसमी रुघाखोकीलगायत श्वासप्रश्वासबाट सर्ने रोगको जोखिम ५० प्रतिशतसम्म कम हुन सक्छ,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.वासुदेव पाण्डे बताउँछन् । उनकाअनुसार थुप्रै संक्रामक रोग हातको सरसफाइमा हुने कमीले गर्दा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन्छ । आजकाल जीवाणु र विषाणुजन्य संक्रमण बढी हुने भएकोले पैसा र मोबाइल छोएपछि समेत हात धुन उनी सल्लाह दिन्छन् ।
नोवल कोरोना भाइरस, मौसमी रुघाखोकी, झाडा पखाला, हैजा, ग्यास्ट्रो इन्ट्राइटिस, टाइफाइड, क्षयरोग, श्वासप्रश्वासबाट सर्ने रोग, हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’, जुका, चुर्ना, निमोनिया, छाला/आँखासम्बन्धी रोगलगायत थुप्रै रोगको संक्रमणबाट बच्न पनि नियमित हात धुनुपर्ने डा. पाण्डे जोड दिन्छन् ।
सीडीसीका अनुसार हात धुनु आफैंले लिन सकिने एक प्रकारको खोपजस्तै हो । यसले झाडापखाला र श्वाससम्बन्धी संक्रमण फैलिनबाट जोगाएर स्वस्थ रहन सघाउँछ । केही खास गतिविधिपछि नियमित रूपमा सही तरिकाले हात धुने र कीटाणुलाई हटाउने एउटा सबैभन्दा राम्रो विधि भएको उसले जनाएको छ । नियमति हात धुने बानीले बिरामी हुनबाट जोगाउनुका साथै अन्य व्यक्तिमा समेत कीटाणुकोप्रसारलाई रोक्छ ।
एउटा अत्यन्त सामान्य कुरा मानिने साबुनपानीले हात धुने प्रक्रिया कडाभन्दा कडा प्रकारको संक्रामक रोगसँग लड्ने सशक्त, विज्ञान प्रमाणित हतियार हो । तर विश्वभरि गरिएका विभिन्न अध्ययनले के देखाएको छ भने, हामीमध्ये धेरैजसोले उपयुक्त रूपमा आवश्यक मात्रामा हात सफा नै गर्दैनौं । सफा गरे पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा गरिएको हुँदैन ।
साबुनपानीले राम्ररी धोएर वा ह्यान्ड सेनिटाइजर आदिका माध्यमले हातको स्वच्छतालाई कायम राख्दा थुप्रै प्रकारका संक्रमणजन्य रोगको रोगथाम गर्न सकिने कुरा हालै विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, माइक्रोबायोलजी विभागका डा. पीयूष राजभण्डारी बताउँछन् ।
मुलुकको आम जनसंख्यामा हात धुने प्रक्रियाबारे विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन छैन । यूएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरद्वारा गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार, खानुभन्दा अघि हात धुनेले पनि ९७ प्रतिशत समय उपयुक्त रूपमा हात धुने गरेको पाइँदैन । उनीहरू राम्ररी हात धुनु र २० सेकेन्डसम्म साबुन दल्नुमा असफल हुन्छन् । यसरी कम समयमा हात धुँदा हातमा भएका सबै रोगका कीटाणुको नाश हुँदैन । अझ मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीद्वारा करिब सात वर्षअघि गरिएको एउटा अध्ययनमा त के पाइएको थियो भने, मात्र ५ प्रतिशत व्यक्तिले मात्र सही प्रकारले हात धुने गर्छन् ।
हात धुने उचित तरिका
राम्ररी हात धुनलार्ई न्यूनतम २० सेकेन्ड समय खर्चिनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले जनाउँदै आएको छ । बच्चालार्ई राम्ररी हात धुन सिकाएर एउटा राम्रो बानीको विकास गर्न सकिन्छ । उचित प्रकारले हात धुनका लागि पानीमा हात भिजाएर पर्याप्त मात्रामा हातमा साबुन लगाएर दुवै हातलार्ई राम्ररी मोल्नुपर्छ । दुवै हातको औंलालार्ई आपसमा समातेर औंलाको पछाडिको खण्ड अर्को हातमा दल्नुपर्छ । एउटा हातको औंलालाई अर्को हातले समातेर घुमाउँदै दल्नुपर्छ । र, फेरि यस्तै विपरीत क्रममा समेत गर्नुपर्छ ।
पानीले राम्ररी हात धुनुपर्छ । धोएको हात सफा तौलियाले राम्ररी पुछ्नुपर्छ । यस्तो प्रक्रियाले हात स्वस्थ र सुरक्षित हुन्छ ।
राम्ररी हात धोएर त्यसलाई आफूले लगाएको लुगाको कुना, खल्तीमा राखिएको रुमालले वा सारीको आँचलले पुछ्नु हुँदैन । यसमा पहिल्यैदेखि कीटाणु रहेको हुन्छ जून चिसो हातमा टाँसिन्छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार, सफा ठाउँमा राम्ररी घाममा सुकाइएको तौलियाले नै हात पुछ्नुपर्छ । तौलियालार्ई कीटाणुरहित बनाउन उम्लिरहेको पानीमा धुनुपर्छ ।
हातमा ३२ सय ब्याक्टेरिया
कोलेराडो विश्वविद्यालयमा गरिएको एउटा अनुसन्धान अनुसार औसत रूपमा हाम्रो हातमा १ सय ५० विभिन्न प्रजातिका ३२ सय ब्याक्टेरिया हुन्छन् । हातलाई राम्ररी सफा नगरिएको स्थितिमा हात मिलाउँदा, अर्कालाई छुँदा यो ब्याक्टेरिया अन्य व्यक्तिमा सर्छ । हातमा मानव मलमा पाइने रोगाणुहरूसमेत पाइन्छन् ।
हात धुन साबुन महत्त्वपूर्ण
हातलाई साबुनपानीले धुँदा मात्र पानीले हात धुनुको दाँजोमा धेरै बढी मात्रामा रोग उत्पन्न गर्ने जीवलाई हटाउँछ । साबुनले छालामा जलन उत्पन्न हुने व्यक्तिले यो बुझ्नु आवश्यक हुन्छ कि साबुनमा फरक ‘पीएच’ अर्थात् तटस्थ, अलिकति क्षारीय वा अलिकति अम्लीयपन हुन सक्छ । यति मात्र नभई साबुनमा भएको सुगन्धले पनि जलन उत्पन्न गर्न सक्ने औंल्याउँदै डा. पाण्डेले अप्ठ्यारो हुने व्यक्तिले साबुनलाई परिवर्तन गरेर जलनको समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्ने बताउँछन् । यति मात्र नभई संक्रमण नहुने हिसाबले तरल साबुन ठोस साबुनभन्दा राम्रो मानिन्छ ।
जर्नल अफ एन्टिमाइक्रोविय थेरापीमा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार हात धुनका लागि साधारण साबुनसमेत एन्टिब्याक्टेरियल साबुन जत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ । अनुसन्धान अनुसार, वास्तविक स्थितिमा साधारण साबुन र एन्टिब्याक्टेरियल साबुनको प्रभावमा कुनै विशेष अन्तर हुँदैन । संक्रमण मुक्त गर्ने एन्टिब्याक्टेरियललगायत साबुनको दाँजोमा सामान्य साबुनले भने विधि पुर्‍याएर हात धुन पर्ने डा. राजभण्डारी औंल्याउँछन् ।
स्वास्थ्यकर्मीबाट पनि संक्रमण खतरा
डब्लूएचओका अनुसार स्वास्थ्य निकायमा स्वास्थ्यकर्मीले हातलाई पर्याप्त र उचित रूपमा नधुँदा बिरामीलाई अस्पतालजन्य संक्रमण हुने सम्भावनामा वृद्घि हुन्छ ।
अस्पतालमा भर्ना भएका एक सय बिरामीमध्ये ७ जना उच्च आय भएका राष्ट्रका र १० जना मध्यम र निम्न आय भएका राष्ट्रका बिरामीलाई स्वास्थ्य रेखदेखसँग सम्बन्धित संक्रमण हुने गर्छ । इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आईसीयू) मा भएका गम्भीर रूपले बिरामी र कमजोर रोगीको हकमा भने यो एक सय जनामा ३० जनासम्म संक्रमित हुने गरेको देखिएको छ ।
बर्सेनि विश्वभरिमा करोडौं बिरामी स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको संक्रमणले प्रभावित हुन्छन् । जसमध्ये एउटा उच्च अनुपात रोगाणुका कारण हुन्छ । जो एन्टिबायोटिकप्रति प्रतिरोधी हुन्छन् । स्वास्थ्य स्याहारसँग जोडिएका संक्रमण त्यतिखेर हुन्छन्, जब स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले छुँदा बिरामीमा रोगाणु सर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि हातको स्वच्छताका पाँच क्षण रहेको डब्लूएचओले औंल्याएको छ । यसअन्तर्गत बिरामीलाई छुनुभन्दा अघि, स्वच्छता र कुहिने प्रक्रिया रोक्नुभन्दा अघि शरीरको तरल पदार्थको सम्पर्कपछि, एउटा बिरामीलाई छोएपछि र रोगीको परिवेश (सराउन्डिङ) लाई छोएपछि समेत संक्रमणमुक्त हुने गरी हात धुनुपर्छ । प्रत्यक्ष रोगीको सम्पर्क मात्र नभई स्वास्थ्यकर्मीलाई रोगीको सम्पर्कले गर्दा प्रदूषित सतहलाई छोएपछि समेत हातमा जीवाणु आउन सक्छन् ।
जर्नल इन्फेक्सन कन्ट्रोल एन्ड हस्पिटल इपिडिमियोलजीमा प्रकाशित सन् २०१० को एउटा अध्ययनमा के देखियो भने, मात्र ४० प्रतिशत डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले अस्पतालमा हात स्वच्छताको नियमलाई पालन गर्छन् । स्वास्थ्यकर्मीले कुनै न कुनै चरणमा हात उपयुक्त तरिकाले संक्रमणमुक्त हुने गरी धुनेबारे तालिम लिएको औंल्याउँदै डा. राजभण्डारी थप्छन्, ‘हात धुने प्रक्रियालाई कनिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी, अप्रेसन गर्ने बेलामा शल्य चिकित्सकलगायतले बढी पालना गर्छन् ।’ उनका अनुसार चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीले नियमित रूपमा उपयुक्त रूपले हात धुने नियमको पालना गर्दा अस्पतालजन्य संक्रमणमा कमी आउँछ ।
नुहाउँदा, कपाडा धुँदा उपयोग गरिने रासायनिक पदार्थ नै साबुन हो । यसलाई बोसो, अम्लको पानीमा घुल्ने लवण भने पनि हुन्छ । यसमा मुख्य रूपमा सर्फेक्टेन्ट अर्थात् फोहोर हटाउने रसायन, डिटर्जेन्ट, ग्लिसरिन, सुगन्धीलगायत मात्रा हुन्छ । यसको प्रचलन पछिल्लो ५–६ दशकयता बढेको छ । यसअघि धेरैजसो माटो, खरानी, रिठ्ठा आदिलाई हात वा कपाललगायत सफा गर्नका लागि उपयोग गरिन्थ्यो ।
हाम्रो हात, शरीरमा भएका थुप्रै प्रकारको सूक्ष्म जीव, लवण, धुलोका कण, पसिना, तैलीय पदार्थ, मृत कोषिका आदिमा साबुन लगाउँदा पानीसँगै पखालिन्छ । बजारमा मुख्य रूपमा हात धुने र नुहाउने गरी दुई प्रकारका साबुन पाइने गरिएको रसायनशास्त्री विनय झा बताउँछन् । साबुनको गुणस्तर त्यसमा भएको कुल बोसो (टोटल फ्याटी म्याटर अर्थात् टीएफएम) मा निर्भर गर्छ । नुहाउने साबुनमा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म टीएफएम प्रयोग गरिन्छ । यस्तै नुहाउने साबुनमा सुगन्धीलगायतका अन्य थुप्रै पदार्थसमेत थपिने गरिन्छ ।
साबुन नभए सेनिटाइजर
हातमा भएको कीटाणुको संख्यामा कमी ल्याउन साबुनपानीले हात धुनु सबैभन्दा उपयुक्त तरिका हो । तर यदि साबुनपानी छैन भने अल्कोहलमा आधारित ह्यान्ड सेनिटाइजर उपयोग गर्न सकिन्छ ।
सीडीसीका अनुसार, यस्ता सेनिटाइजरमा कम्तीमा ६० प्रतिशत अल्कोहल हुनुपर्छ । अल्कोहलमा आधारित सेनिटाइजरले हातमा भएको कीटाणुलार्ई छिटो कम गर्न मद्दत गर्छ । तर यस्ता सेनिटाइजरले भने सबै प्रकारका कीटाणुलाई हटाउन सक्दैन । सीडीसीका अनुसार, जतिबेला हातलाई हेर्दा नै फोहोर देखिन्छ त्यतिबेला ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रभावकारी हुँदैन । प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०९:०६
रंगभेद, फिक्सिङ र अमान्य गोल
घरेलु फुटबलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित ‘ए’ डिभिजन लिगमा यसपालि मैदान बाहिर र भित्रका केही घटना यस्ता रहे
फाल्गुन १०, २०७६ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — नयाँ च्याम्पियनको रूपमा मछिन्द्र क्लबले सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७६ को उपाधि जितेको ठीक एक साता भयो । सहभागी १४ क्लबले मंसिर २८ देखि फागुन ३ सम्म दशरथ रंगशाला र एन्फा कम्प्लेक्स, सातदोबाटोमा ९१ खेल खेले । घरेलु फुटबलको सबैभन्दा प्रतिष्ठित मानिने प्रतियोगिता ‘ए डिभिजन लिग’ मा यसपालि मैदानबाहिर र भित्रका चर्चित ७ घटनाक्रम :
खुलमखुला फिक्सिङ ?
२०७५ सालको उपाधि होडको प्रतिस्पर्धा चर्किंदै गएको बेला मनाङका प्रशिक्षक सुमन श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमै प्रतिद्वन्द्वीमाथि मिलेमतोको आरोप लगाएका थिए । उनलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले कारबाही गर्नुको सट्टा प्रदेश प्रशिक्षकको पुरस्कार दिएको थियो । त्यसैले हुनसक्छ, यसपालिको लिगमा पनि प्रशिक्षक र अफिसियलहरू खुला रूपमै ‘फिक्सिङ’ को आरोप–प्रत्यारोपमा ओर्लिए ।
विभागीय टिम एपीएफ र सरस्वती युवा क्लब रेलिगेसनबाट कसरी जोगिने भन्ने दबाबमा थिए । ठीक यही बेला मैदानबाहिर चलखेल सुरु भयो । सरस्वतीले नवौं खेलमा आएर हिमालयन शेर्पालाई ४–३ ले हरायो । त्यसअघिका ८ खेलमा २ गोलमात्रै गरेको सरस्वतीको यो लिगमा त्यो नै पहिलो र एकमात्र जित रह्यो । एन्फा कम्प्लेक्सको खेल उस्तै नाटकीय थियो । पहिलो हाफमा ४ गोल भयो । अन्त्यतिर १० मिनेटभित्र ३ गोल थपियो । उक्त खेलमा हिमालयन शेर्पाका गोलकिपर किशोर गिरीलाई मिलेमतोको प्रस्ताव गरेको आरोपमा सरस्वतीका कप्तान दीपेश श्रेष्ठलाई इन्ट्रिग्रिटी अफिसर सुदीप आचार्यको रिपोर्टको आधारमा निलम्बन गरिएको थियो ।
हिमालयन शेर्पाका व्यवस्थापक बिजेन्द्र पुडासैनीलाई पनि निलम्बन गरियो । त्यो जितले पनि सरस्वतीलाई ए डिभिजनमा टिकाउन सकेन । एपीएफले १२ औं खेलमा फ्रेन्ड्सलाई ५–२ ले पराजित गरेपछि मात्रै शीर्ष श्रेणीमै रहने पक्का गरेको थियो । त्यो उसको दोस्रो जित थियो र एन्फा कम्प्लेक्समा ५८० दर्शकबीच भएको उक्त खेलमाथि पनि थुप्रै प्रश्न तेर्सियो । दोस्रो हाफमा ५ गोल भएको उक्त खेलको अन्तिम २ मिनेटमा एपीएफले २ गोल गरेको थियो । हुन त सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले २०६६–६७ को लिगमा रेलिगेसन टार्न संघर्ष गरिरहेको बेला मछिन्द्रमाथि हात पारेको ८–० को जितले नेपाली फुटबलमा ठूलै सनसनी फैलाएको थियो ।
यसपालि प्रशिक्षक र पदाधिकारीहरूले फिक्सिङबारे खुलेरै प्रश्न उठाए । आरोप लगाए । सरस्वतीका प्रशिक्षक प्रदीप नेपाल, अध्यक्ष शिक्षित पराजुली, एपीएफका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले एकअर्काको नतिजामाथि शंका गर्दै फिक्सिङको आरोप लगाएका थिए । एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाका प्रियपात्र पराजुली एन्फाका मानार्थ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन् । फ्रेन्ड्सका अफिसियल अनुप कार्कीले रेफ्रीमाथि मिलेमतो गराएर खेलाएको दाबी गरे पत्रकार सम्मेलनमै । खुलेरै सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप लगाइरहे पनि एन्फा लाचार रह्यो । उसले न गम्भीर अनुसन्धान नै गर्‍यो, न त आरोप लगाउनेमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत नै ।
जाली च्यातिँदा गोल अमान्य
दशरथ रंगशालामा मनाङ मर्स्याङदी र सरस्वतीको खेल भइरहेको थियो । मनाङले आक्रामक खेलिरहेको थियो । उसका फरवार्ड निशान लिम्बुले १५ औं मिनेटमा कठिन कोणबाट बल प्रहार गरे । फस्ट बारबाटै बले जालीको सम्पर्कमा पुग्यो । बल पोस्टभित्र छिरेपछि जालीबाहिरबाट ट्र्याकतिर निस्कियो । कारण जाली च्यातिएको रहेछ । च्यातिएको जालीबाट बल निस्किएकाले नै हुनसक्छ, रेफ्री श्याम दनुवारले निशानको ‘गोल’ लाई मान्यता दिएनन् । खेलाडी र अफिसियलले गोल भएको दाबी गरे पनि दनुवारले अस्वीकार गरिदिए । त्यसैले निशानले पहिलो गोलका लागि संकटाविरुद्धको खेल नै कुर्नुपर्‍यो । आठौं चरणको उक्त खेलको म्याच कमिस्नर थिए एन्फा उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंह । रेफ्री एसेसर श्याम लामा । सहायक रेफ्रीहरू नानीराम थापामगर र गणेश चौधरी । खेल भने विमल रानाको ४६ औं मिनेटको गोलसँगै मनाङले नै जितेको थियो ।
एन्फा कम्प्लेक्समा हिमालयन शेर्पाविरुद्ध आर्मीको खेल भइरहेको थियो । दोस्रो हाफको सुरुमै हिमालयन शेर्पाले मिडफिल्डर विनोद गुरुङ परिवर्तन गर्दै भिसोन गुरुङलाई पठाउने तयारी गर्‍यो । फोर्थ अफिसियलले नियमित ‘चेक’ गरेर भिसोनलाई मैदानमा पठाइदिए । जबकि विनोदले मैदानमै खेलिरहेका थिए । यी दुवै खेलाडी करिब १ मिनेट एकसाथ खेलिरहे, जति बेला मैदानमा हिमालयन शेर्पाको खेलाडीसंख्या १२ पुगेको थियो ।
‘विनोद निकालेर भिसोन मैदान छिराउन भनेको थिएँ, तर फोर्थ अफिसियलले ढिला भयो भनेर भिसोनलाई पठाइहालेछन्, उनी पनि छिरेर खेलिहाले,’ त्यो क्षण सम्झिँदै हिमालयन शेर्पाका प्रशिक्षक सन्जीव बुढाथोकीले भने । ११–११ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने फुटबलमा एउटै टिमले १२ खेलाडी उतारेको दुर्लभ क्षण थियो त्यो । तेस्रो चरणको उक्त खेल आर्मीले २–० ले जितेको थियो ।
पाँचौं चरणमा मछिन्द्र र मनाङले २–२ खेल्दै अंक बाँडेका थिए । तर, त्यो नतिजाभन्दा बढी चर्चा भयो बलबिनाको खेलबारे । खेल सकिएलगत्तै मनाङका जगजित श्रेष्ठले मछिन्द्रका फरवार्ड दीपक राईलाई कुहिनाले प्रहार गरेपछि उपाधि होडका टिमहरूबीच दशरथ रंगशालामा तनाव सुरु भएको थियो ।
रेफ्री श्रवण लामाले मनाङका दोस्रो रोजाइका गोलकिपर अशोक बराललाई रातो कार्ड देखाए । एन्फाले उनलाई ६ खेलमा निलम्बन र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो । मनाङकै जगजितलाई ५ खेल निलम्बन र १० हजार जरिवाना तथा रन्जन विष्टलाई २ खेल निलम्बन गरियो । मनाङका किट्स म्यानेजर शिव लामा लिगका सबै खेलमा निलम्बित भए भने १० हजार जरिवानामा पनि परे । झट्का मछिन्द्रलाई पनि पर्‍यो । उसका डिफेन्डर देवेन्द्र तामाङ, दीपक र विजय धिमाल २–२ खेल निलम्बनमा परे । त्यो घटनाले दुवै टिमलाई समस्यामा पारेको थियो ।
अफ्रिकीमाथि रंगभेद !
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा २०६० को दशकयता ‘गेम चेन्जर’ को काम गरिरहेका छन् अफ्रिकी खेलाडीहरूले । एक टिमबाट एउटै खेलमा तीन विदेशी मैदानमा ओर्लन पाउँछन् र यस्तो कोटामा अफ्रिकीकै वर्चस्व रहँदै आएको छ । तीन विभागीय टिमहरू आर्मी, पुलिस र एपीएफमा भने विदेशी खेलाडी राख्ने चलन छैन ।
नवौं चरणमा आर्मीले कप्तान भरत खवासको गोलमा जावलाखेल युवा क्लबलाई १–० ले हरायो । तर, एन्फा कम्प्लेक्समा भरत त्यो गोलका लागि भन्दा पनि अर्कै विषयले चर्चामा आए । उनीमाथि जावलाखेलका फरवार्ड ड्याडी जुनियर वाम्बाले रंगभेदी व्यवहार गरेको आरोप लगाए । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा जावलाखेलले फ्रि–किक पाएको थियो र त्यो ‘डेड बल’ प्रहार गर्ने क्रममा रहेका आफ्नै साथीलाई रोक्दै वाम्बाले बल समाते अनि उनले आफूलाई भरतले ‘मंकी’ (बाँदर) भनेको भन्दै रेफ्री कविन व्यन्जनकारलाई सुनाए । रेफ्रीले खेलमा खासै वास्ता गरेनन्, खेल सुचारु गर्न लगाए ।
फ्रि–किक हान्न लागेको अवस्थामा बल समात्ने खेलाडीलाई कार्ड दिने नियम छ तर व्यन्जनकारले न त वाम्बालाई कार्ड दिए न त उनको आरोप सुनुवाई नै गरे । क्यामरुनबाट लिग खेल्न आएका वाम्बाले ‘प्लेयर बक्स’ मै पुगेर पनि प्रशिक्षक र अफिसियललाई भरतले दुईपल्ट बाँदर भनेको भन्दै खेल्न नचाहेको बताएका थिए । पछि साथीहरूले सम्झाइबुझाइ गरेपछि मात्रै उनी खेललाई निरन्तरता दिन तयार भएका थिए । लिगका निर्देशक सन्जीव मिश्रले नेपाली फुटबलमा पहिलोपल्ट लागेको रंगभेदको आरोपबारे अनुसन्धान गर्ने बताए तर उनको बोली बोलीमै सीमित बन्यो । विश्व फुटबलमा रंगेभद र फिक्सिङको आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ । आरोप प्रमाणित भए लामो अवधिको निलम्बन वा त्यस्तै ठूलो कारबाही गरिन्छ ।
सन्तोषको सय गोल
च्यासलका फरवार्ड सन्तोष साहुखल ‘ए’ डिभिजन लिगको आधुनिक युगमा (२०४६ सालयता) १०० गोल गर्ने पहिलो खेलाडी भए । उनले १८ औं मिनेटमा गोल गर्दै पुलिसविरुद्ध १–१ को बराबरी गरेका थिए र त्यो नै सन्तोषको ‘ए’ डिभिजन लिग करिअरको १ सय गोल बन्यो । अघिल्लो दुई खेलमा गोल गर्न चुकेका च्यासलका यी कप्तानले पुलिसविरुद्ध २ गोल गरेपनि पाँचौं चरणको खेल २–२ मा सकिएको थियो ।
३३ वर्षीय सन्तोषले २०६० सालमा थ्रीस्टारबाट करिअर थालेका थिए र ए डिभिजन लिगको ४२ औं संस्करणमा आएर १ सय गोलको कोसेढुंगा पार गरेका हुन् । उनले यो लिगमा ७ गोल गरे । यससँगै नेपालको शीर्ष डिभिजनको लिगमा उनको गोलसंख्या १०७ पुगेको छ । उनी चार वर्षयता जापानमै बस्छन् र लिग खेल्नमात्रै स्वदेश फर्कने गर्छन् ।
आर्मीका कप्तान भरत खवासले पनि सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा ५० गोल यसैपालि पूरा गरे । उनले १२ चरणमा ब्रिगेड ब्वाइजविरुद्ध ३–० को जितमा पाँचौं मिनेटमा बललाई पोस्टको दिशा दिँदै लिगमा आफ्नो करिअरको ५० औं गोल गरेका थिए । यो सिजन ४ गोल गर्दै लिगकै उत्कृष्ट फरवार्डको अवार्ड जितेका उनी ‘ए’ डिभिजन लिगमा २०४६ सालयता ५० गोल पूरा गर्ने आठौं खोडी हुन् । अब उनले १ सय गोल गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
थ्रीस्टारका फरवार्ड सन्जोक राई (तस्बिरमा) ले दसौं चरणमा सरस्वतीविरुद्ध ४–० को जितमा ह्याट्रिक गरे । २०७५ को लिगमा कसैले एउटै खेलमा ३ गोल गरेका थिएनन्, त्यसैले उनी २०७० को लिगपछि ए डिभिजनमा पहिलो ह्याट्रिककर्ता बने । उनले दोस्रो हाफमा १४ मिनेटभित्र ३ गोल गरेका थिए । अन्तिम चरणमा पुलिसका जुमनु राईले पनि फ्रेन्ड्सविरुद्ध ३–० को जितमा ह्याट्रिक गरे ।
लिग च्याम्पियन मछिन्द्रका फरवार्ड दीपक राई, विंगर सुजल श्रेष्ठ, मिडफिल्डर विशाल राई (बी) र गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ पनि यसैपालि ह्याट्रिकर्ता भए । उनीहरूको ह्याट्रिक गोलमा होइन, देशकै प्रतिष्ठित लिगको उपाधिमा हो । यी चारै खेलाडीले २०७० र २०७५ सालमा मनाङबाट ‘ए’ डिभिजन लिगको उपाधि जितेका थिए । यसपाली मछिन्द्रको ऐतिहासिक उपलब्धिसँगै उनीहरूले सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको ट्रफी चुमेका हुन् । विशाल राईले लिगकै उत्कृष्ट मिडफिल्डरको अवार्ड पनि जिते ।
सुजल र दुई विशाल एन्फा एकेडेमीको एउटै ब्याचका खेलाडी हुन् । पथरी, मोरङका दीपक पूर्वको प्रतियोगिताबाट उदाएका फरवार्ड हुन् । सुजल र विशाल राई पनि पूर्वकै हुन् भने गोलकिपर विशाल सिन्धुपाल्चोकका । यी चारै खेलाडी गत कार्तिकमामात्रै मनाङ मर्स्याङदी छाड्दै मछिन्द्रका पुगेका हुन् । मछिन्द्रलाई १६ औं लिग च्याम्पियन क्लब बनाउन उनीहरूको प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण रह्यो ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ ०९:०३
बिनिता पन्त, प्रनिती सिंह
कोराेना प्रकोप: जोखिममा ६० वर्षमाथिका
'हामीले गरेको कोरोना परीक्षणमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन'